မြောက်ပိုင်းအလင်းများ, နော်ဝေတွင် ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | အကြံပေးချက်များ, နော်ဝေ
ကြည့်ရှုရန်အလှဆုံးသဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာဒါခေါ်ဖြစ်သည် မြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်သို့မဟုတ် Aurora borealis။ ထိုမြောက်ပိုင်း၌ဆောင်းရာသီကိုမြင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းပါတကား! ဒီမီးလုံးတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိပေမယ့်ဒီနေရာမှာဥရောပမှာဖြစ်တယ် နော်ဝေ.
La နော်ဝေမြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ် ၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီဆောင်းပါးသည်ရေခဲမိုးကောင်းကင်ကိုဖြတ်ကျော်သောထိုစိမ်းလန်းသောသရဲတစ္ဆေများအကြောင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဒီသဘာဝဖြစ်ရပ်ဆန်း ဆိုလာအမှုန်များသည်ကမ္ဘာ့သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်တိုက်မိသောအခါဖြစ်ပေါ်သည်အတူတူပင်၏အကာအကွယ်အတားအဆီး။ သို့သော်အချို့သည်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပြီးမြောက်ပိုင်းအလင်းများပေါ်ထွက်လာသည်။ အလင်းရောင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များဖြင့်ကောင်းကင်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောဝတ်လုံကိုရက်လုပ်သည်။ လိမ္မော်သီး, အနီရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အဆုံးစွန်သောအစဉ်အမြဲနိုင်ပေမယ့်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ပိုမိုတွေ့ရှိရသော်လည်း ဒါကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးထမ်းဘိုးမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည် ဒါကြောင့်သူတို့တည်ရှိတာပေါ့ မြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်နှင့်တောင်ပိုင်း auroras။ မြောက်ဘက်တွင်မီးထွန်းရန်လွယ်ကူခြင်းကြောင့်နော်ဝေနှင့်အိုက်စလန်တို့တွင် ပို၍ ကြည့်ရှုရန်နေရာများသို့မဟုတ်ရာသီဥတုအခြေအနေများပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့်ယင်းတို့ကိုမြင်တွေ့ရန်အထောက်အကူပြုသည်။
ကျနော်တို့ရာသီ၏အစမှာနော်ဝေတွင်မြောက်ပိုင်းအလင်းများကြည့်ဖို့မှန်။ ရာသီသည်မတ်လကုန်အထိစက်တင်ဘာလကုန်၊ အောက်တိုဘာအစမှသည်ယခုလအထိဖြစ်သည်။။ ဤတွင်မှအလွန်မှောင်မိုက်လာသည့်အတွက်မြောက်ဘက်မှအလင်းရောင်များကိုမိုus်းမလင်းမှီမှနံနက်စောစောအထိမြင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်အစိမ်း၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်၊ လိမ္မော်နှင့်ခရမ်းရောင်တို့တွင်အရောင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုရန်အမြဲမှောင်မိုက်နေသင့်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကသဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ အချို့သောခန့်မှန်းချက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းတိကျမှန်ကန်မှုမရှိပါ။ လှပသောနော်ဝေရှုခင်းများကသင့်ကိုမမေ့နိုင်သောပို့စကတ်များကိုအမြဲပေးမည်ဖြစ်သော်လည်းအတွေ့အကြုံအားအာမခံနိုင်သည့်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ရာသီဥတုခြောက်သွေ့ပြီးမြောက်သောအခါမြောက်ပိုင်းအလင်းများကိုမြင်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည် နှင့်ယနေ့ရာသီဥတုလျှောက်လွှာကျွန်တော်တို့ကိုအမှတ်အသား hit ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ထို့နောက် နော်ဝေတွင်မြောက်ပိုင်းမီးထွန်းရန်အကောင်းဆုံးနေရာများမှာအဘယ်နည်း။ အခြေခံအားဖြင့် ၄ ခုတွင် Lyngenfjord ဒေသ၊ Narvik၊ North Cape နှင့် Senja တို့ဖြစ်သည်။ Lyngenfjord ၄ င်းသည်လှပသော ၈၂ ကီလိုမီတာရှည်လျားသော fjord ရှိပြီးအဖြူနှင့်အပြာရေခဲမြစ်များနှင့်မီတာနှစ်ထောင်နီးပါးမြင့်သောခမ်းနားထည်ဝါသောတောင်တန်းများရှိသည်။ ထိုသို့ရောက်ရန်လမ်း၊ လှေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းလွယ်ကူသည်။ ဒီနေရာတွင်နှင်းလျှောစီးလေ့ကျင့်ခြင်း၊ အပြင်အားကစားပြုလုပ်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသောလေ့လာရေးခရီးများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်သင်ငှားရမ်းနိုင်သည် အဆိုပါ Aurora ကြည့်ဖို့ခရီးစဉ်.
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာသင်အဲဒီမှာအိပ်နေနိုင်တယ် ဖန်တဲ ဒါအရမ်းလှတယ် Crystal lavvos။ အဲဒီမှာခြောက်ခုသာရှိပြီးဈေးလည်းမကြီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မမေ့နိုင်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောခရီးစဉ်တွင်မိနစ် ၉၀ ကူးတို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လမ်းပြ၊ အစားအစာနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၊ နွေးထွေးသောအဝတ်အစားများ၊ တည်းခိုခန်းများပါ ၀ င်သည်။ နီးပါး 90 နာရီတစ်ခရီး။
ဤအတောအတွင်း Narvik သည်ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်ရာနေရာဖြစ်ပြီးအာတိတ်သို့ဂိတ်ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြောက်ပိုင်းအလင်းများကိုမြင်ရန်ဤတွင်များသောအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောအခြေအနေများရှိပြီးမီတာ ၁၅၀၀ ကျော်မြင့်သောတောင်များနှင့်ဝန်းရံထားသောထူးခြားသောမြင်ကွင်းများရှိသည်။ ဒါဟာ Narvikfjellet ရဲ့ထိပ်ကနေအတိအကျဖြစ်တာမို့ကောင်းကင်ရှုခင်းဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီးမြို့ထဲမှာမင်းအတွက်လေ့လာရေးခရီးတွေစီစဉ်နိုင်တဲ့အေဂျင်စီတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ "မြောက်ပိုင်းအလင်းအိမ်များအတွက်အမဲလိုက်".
ဤလေ့လာရေးခရီးများကသင့်ကိုတောင်တန်းများဆီသို့ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာအတုအယောင်မီးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ကိုကြယ်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပြီးကြယ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးသေနတ်ပစ်ထားတဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်တည်းခိုရာကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်အလွန်မှော်ဆန်သောမြင်ကွင်းများကိုမြင်နိုင်သည်။ သင်တစ်နေ့တာ၏အချိန်အတန်ကြာအထိစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ မီးကိုသင်မြင်သည်ဟုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှသင်တို့ကိုအာမခံနိုင်သော်လည်းတောင်ပေါ်သို့သွားခြင်း၊ ပူသောအစာစားခြင်းနှင့်မီးပုံပတ်လည်၌ထိုင်ခြင်းသည်တွေ့ကြုံရကျိုးနပ်ပါသည်။
မြောက်ပိုင်းအလင်းများသည်လည်းမြင်နိုင်သည် မြောက်အံကပ်ဒီအမြင့် ၃၀၇ မီတာမြင့်တဲ့ဒီချောက်ကမ်းပါးမှာအဆုံးသတ်တဲ့တောင်ထူထပ်တဲ့အစွန်အဖျား။ Barents ပင်လယ်နှင့်မိုးကောင်းကင်တို့၏မြင်ကွင်းကိုသတိရသင့်သည်။ ဒီအငူ Mageroya ကျွန်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် ၎င်းသည်ခရီးသွားများအတွက်အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်ညဥ့်သန်းခေါင်ယံတွင်ပင်လေ့လာရေးခရီးများဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ Senja သည်ဝေးလံ။ တိတ်ဆိတ်ပြီးသန့်ရှင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ Senja က နော်ဝေတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်း, ကမ္ဘာပေါ်မှာအစင်ကြယ်ဆုံးလေထုလွှမ်းမိုးရာအရပ်။ ပင်လယ်၌တွယ်ကပ်နေသောမြင့်မားသောတောင်တန်းများ၏ရှုခင်းများသည်ယနေ့ခေတ်၏အစဉ်အလာ ဖြစ်၍ အကြိမ်တစ်ထောင်သွားသောကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းတစ်လျှောက်ကားဖြင့်ဤပို့စကတ်ကိုခရီးသွားခြင်းသည်မမေ့နိုင်စရာဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့် ဤရွေ့ကားနော်ဝေအတွက်မြောက်ပိုင်းအလင်းများကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်ကြသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်လူကြိုက်များသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ထပ်မံပြောပေမယ့်ဘာမျှမသေချာဖြစ်ပါတယ်။ ဤစကားစုသည်မြောက်မြားစွာသောအလင်းများကိုမြင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ တိုင်းပြည်သည်အော်ရီရာရာ၏ဘဲဥပုံအောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းဤဖြစ်ရပ်သည်အခြားနေရာများမှမြင်နိုင်သည်မှာထင်ရှားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရပါဘူး နော်ဝေမြောက်ပိုင်းသည်မြောက်ပိုင်းအလင်းများကိုပျော်မွေ့ရန်ကောင်းစွာဖွဲ့စည်းထားသည်။ မှန်ပါတယ်။ မြောက်ဘက်မီးများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိသည်။ ဖန်ခွက်ဘန်ဂလိုများ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားအေဂျင်စီများ၊ ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ညဖက် Safaris၊ ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များစွာရှိသည်။ သငျသညျရုံသည်းခံခြင်းနှင့်အရုဏ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကို၎င်း၏မှော်ရှိနေခြင်းကိုငါပေးမည်ဟုစဉ်းစားရောက်ရှိလာရန်မဖြစ်ဖို့ရှိသည်။
ယင်းကဘာလဲ မြောက်ပိုင်း Lights ကိရိယာအစုံ? ကောင်းတယ် multi-lens ဓာတ်ပုံကင်မရာကျယ်ပြန့်သောထောင့်ပျောက်ဆုံး။ မရပါ ဘက်ထရီ, tripod အပိုနှင့်သဘာဝကျကျသင်၌အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီအဝတ်အစား။ နောက်ဆုံးအကြံပြုချက် - တတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးမြောက်ဘက်ခရီးသွားလာအနည်းဆုံး Bodo သည်အထိ။ Oslo (သို့) Bergen မှအာတိတ်စက်ဝိုင်းသည်ကားဖြင့် (၁၆) နာရီ (သို့) ရထားဖြင့် (၁၉) နာရီဝေးကွာသောကြောင့်သင်လေယာဉ်ဖြင့်သွားသင့်ကြောင်းသတိရပါ။
သင်နှစ်ရက်နေပြီးမြောက်အလင်းကိုကြည့်ဖို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ သင်မြောက်ဘက်သို့ခရီးထွက်လျှင်ရက်ပိုစောင့်ရမည်၊ သင်ကြာကြာနေပါကသင်ရရှိမည့်အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။ အကယ်၍ သင်အအေးမိလေ့မရှိပါကနိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာနှင့်ဇန်နဝါရီလများသည်သင့်ကိုအံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်စေနိူင်သောကြောင့်ချမ်းသည်။ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လအကုန်ကိုစဉ်းစားပြီးသင်နာမည်ပေးမည့်နေရာများကိုထပ်ထည့်ပါ Tromso, Las Lofoten ကျွန်းများ, Las Vesteralen ကျွန်းများ၏သေးငယ်တဲ့ fjord Alta, Svalbard, Varanger နှင့် Helgeland.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » နော်ဝေ » မြောက်ပိုင်းအလင်းများ, နော်ဝေတွင်
Edinburgh Castle သို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်